भ्रष्टाचारमा सरकारको कीर्तिमानी ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ मंसिर १५, सोमबार ११:३८ गते
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएको सरकारलाई पटाक्षेप गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले सत्तारोहण गरेसँगै ‘आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिनँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर विडम्बना ! केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यही सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र कुशासनको पर्याय बन्न पुगेको छ । यो कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएको आरोप होइन । कुशासन र भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नै औँल्याएको विषय हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकका रुपमा देखिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सो संस्थाले नेपालमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण रहेको औँल्याएको छ । विश्वका भ्रष्टाचार हुने १७६ देशलाई समावेश गरी निकालिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १३१औँ स्थानमा परेको छ । गत वर्ष २७ अंकसहित १३०औँ स्थानमा रहेको नेपालले यसवर्ष २९ अंक प्राप्त गरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भने बढेर गएको छ । जसमा राजनीतिक दलहरुकै अग्रसरतामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
कुल पूर्णाङ्क १०० मा ५० अंक पनि प्राप्त गर्न नसक्ने मुलुक बढी भ्रष्ट मानिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनअनुसार राजनीतिकरुपमा हुने भ्रष्टाचार नरोकी सुशासन कायम गर्न नसकिने औँल्याइएको छ । डेनमार्क र न्युजिल्यान्डमात्रै यस्ता मुलुक हुन्, जहाँ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यी दुवै मुलुक ९० अंकका साथ कम भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । यसको साख यी मुलुकका नेतृत्वलाई जान्छ, जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम राख्न सफल भए । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट देशमा भूटान सूचीकृत भएको छ । भारत र चीन समान ४० अंकसहित ७९औँ स्थानमा रहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरका सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको मापन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार भएको बताएका छन् । सार्वजनिक सेवा लिँदा १२ प्रतिशतले घूस दिनु परेको र २९ प्रतिशत सेवाग्राहीले आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नेपालमा तीनमध्ये एक सांसद् भ्रष्ट रहेको र मतसमेत खरिद हुने गरेको विवरण सार्वजनिक हुनुले भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्था उजागर गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले जनाएका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार दीर्घरोगजस्तै बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको दलदलबाट राज्यका कुनै अङ्ग पनि अछूतो छैन । सरकारी सेवामा ४३ प्रतिशत कर्मचारी, २८ प्रतिशत प्रहरी, न्याय क्षेत्रका २४ प्रतिशत न्यायाधीश, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधिसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा एसियाली मुलुकमा नेपालको स्थिति भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि देखिनु दुःखद र लज्जास्पद कुरा हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविमा असर पुग्नु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारीको संरक्षण प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको प्रतिवेदन आउनुका पछाडि भ्रष्टाचारको अनेक प्रकरण ढाकछोप गरिनु नै हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार नगरे पनि भ्रष्टाचारविरूद्ध उठेका आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा झनै बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको हो । ओली सरकारले वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती होल्डिङ, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणसम्ममा भएका अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्नुले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि अपारदर्शिता र अनियमितताको एक दृष्टान्त हो । अनियमिततासम्बन्धी विविध प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न नसकेकै कारण सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको हो । यस विषयमा उठेका सवालहरुको निरुपण गर्न इच्छाशक्ति नदेखाएकै कारण सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हो । तसर्थ, सरकारले भ्रष्टाचारमा होइन सुशासनमा कीर्तिमान कायम राख्न अनियमितताका विषयमा उठेका सवालहरुमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु जरूरी देखिएको छ ।